Nagu saabsan - shirkadda Wonderful Co., Ltd.
Shirkadda Wonderful Co., Ltd. waxay horay u sii waday ruuxa farsamada gacanta. Waxay si adag uga shaqeyneysay warshad hoosaadkan sanado badan. Waxay aasaastay kanaallo badan oo wax soo saar, soo-saar, iyo suuq-geyn ah, waxayna leedahay iib xoog leh iyo nashqadeyn madaxbanaan R & D. Astaamaha ugu waaweyn ee shirkadda waa "Ishine" iyo "neon glo", oo sumcad wanaagsan ku leh suuqyada Yurub iyo Ameerika, isla markaana leh suuq weyn. Ka dib in ka badan toban sano oo raasamaal ah, shirkaddu waxay leedahay ku dhowaad 20 shatiyadaha ku saabsan qaababka cusub iyo muuqaalada cusub ee Shiinaha iyo Mareykanka; waxay soo saartay badeecooyin badan oo iftiimaya iyo khadad ballaadhan oo kala duwan oo loogu talagalay macaamiisha adduunka oo idil.
Shirkadda Wonderful Co., Ltd. waxay leedahay warshad u gaar ah, oo la aasaasay 2006. Warshaddu ma aha oo kaliya inay leedahay nidaam maamul oo tayo sare leh oo dhammaystiran, laakiin sidoo kale waxay ku leedahay halkaas warshad u gaar ah iyo qalab wax soo saar oo horumarsan. Warshadu waxay leedahay in ka badan 4000 mitir murabac oo ah meel wax soo saar caadi ah, R & D u gaar ah iyo kooxda wax soo saarka, 7 khadadka wax soo saarka, iyo in ka badan 100 shaqaale ah. Waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO 9001 iyo kormeerka warshada ee ICTI, BSCI, iyo shahaadada shahaadada WCA. waxay u dhigtay aasaas adag iyo dammaanad qaadka OEM iyo ODM mashaariicda u habeynta macaamiisha adduunka oo idil. Shirkaddu waxay wadashaqeyn ganacsi sannado badan la leedahay shirkadaha adduunka caanka ka ah, oo ay ka mid yihiin Disney, Coco-Cola, Walmart, dollar tree, CVS, Auchan Auchan, Carrefour, iwm.
Hadafka shirkaddu waa abuurista farxad, kor u qaadista shaqaalaha, iyo abaalgudka bulshada. Iyada oo alaabteenna tayo sare leh, adeeg aad u fiican, iyo faa'iidooyin qiimo leh oo farxad u keenaya dhammaan isticmaaleyaasha!
Shirkaddu ma aha oo kaliya alaab-qeybiye badeecooyin ammaan ah oo tayo sare leh laakiin sidoo kale waxay tahay dhoofiso dhaqan dhalaalaya. Alaabtayada iftiimaya waxay noqon karaan la-hawlgalayaal waaweyn oo xisbiyada ah, waxayna abuuraan jawi cajaa'ib leh oo farxad leh si dadku had iyo jeer u xusuustaan ​​farxaddaas oo kale daqiiqad kasta oo muhiim ah oo ay weheliso koorsada nolosha!